अबदेखि घरजग्गा कर घट्यो, घरको मूल्यांकन दर पनि फेरियो ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उद्योग > अबदेखि घरजग्गा कर घट्यो, घरको मूल्यांकन दर पनि फेरियो !
काठमाण्डौं । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि लागू हुने गरी घरजग्गा कर घटाएको छ। सेवाग्राहीले करको रकम बढी भएको गुनासो गर्न थालेपछि महानगरपालिकाले कर घटाएको हो।
त्यस्तै, बाटो प्रमाणित भएको कच्ची बाटोमा रहेको ३ आनासम्मको घरजग्गामा प्रतिआना २ हजार र त्यो भन्दा बढीमा प्रतिआना ८ सय रुपैयाँ कायम थियो। तर अब भने यस्तो घरजग्गामा प्रतिआना ५ सय र एक रोपनी माथिको हकमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै कर लाग्ने भएको छ।
गोरेटो बाटो प्रमाणीत भएको तर बाटो भएको वा नभएको दुवैलाई ३ आनासम्म १ हजार र त्यसन्दा बढीलाई प्रतिआना ८ सय रुपैयाँ लिने गरिन्थ्यो। अब भने यसमा कमी आउँदै प्रतिआना ३ सय र १ रोपनी बढीमा ७ हजार कर लाग्ने भएको छ ।
गत फागुनमा गरिएको संसोधनका कारण ठूला करदाताको तीन गुणासम्म कर घट्न गएको थियो भने मझौलाको हकमा तीन गुणासम्म वृद्धि भएको थियो।
१० साउन २०७३, ११।००
२०७३ साउन १० गते ११:३५ मा प्रकाशित
सानिमाको प्रगति विवरण सार्वजनिक : एक अर्ब ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नाफा !
६१ लाख गरिबका लागि ५१ अर्ब खर्च गरिँदै, हेर्नुहोस् कुन जिल्लामा कति छन् गरिब ?
लोकसेवाले माग्यो साढे पाँच सय सुब्बा, कहाँ-कहाँबाट दिने आवेदन ? (विज्ञापनसहित)
२०७३ मा भ्रष्टाचार, कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न आग्रह